Dhageyso:-Axmed Madoobe oo kasoo horjeestay qorsho uu wato Madaxweyne Farmaajo - Awdinle Online
Dhageyso:-Axmed Madoobe oo kasoo horjeestay qorsho uu wato Madaxweyne Farmaajo
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay hehsiiskii doorasho oo ay Muqdisho ku gaareen Madaxweyne farmaajo, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Axmed Madoobe waxaa uu sheegay in go’aanadii ay Madaxdu gaareen kaliya uu aha heshiis, balse aysan aheyn xeer, isaga oo u muuqday mid ka jawaabayay hadalkii Madaxweyne farmaajo ee ahaa in heshiiska doorashada la horgeyn doono Golaha Shacabka.
“ Waxaad ogaataan in heshiiskaas uusan xeer aheyn balse uu yahay xalka ugu dambeeya ee aan isla aragnay oo doorasho lagu geli karo, una baahneyn in la ansixiyo ayuu yiri” Axmed Madoobe.
Sidoo kale Axmed Madoobe waxaa uu sheegay in dalka uu ka xuroobi doono in qabiil wax lagu qeybsado,sida doorashada Xildhibaannada, isla markaana loo gudbi doono in hab degaan wax lagu soo doorto.
Hadalka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kusoo aadayaa xilli Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka ay dalbadeen in la horkeeno heshiiskii doorasho oo ay gaareen Madaxweyne Farmaao, Madaxda Dowlad goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Previous articleXOG: Villa Somalia oo dib u soo celineysa xiriirkii Imaaraadka
Next articleDarawal Mooto Bajaaj oo lagu dilay Magaalada Muqdisho